Qofkii Antoine Griezmann Ku Qanciyay Barcelona Oo La Ogaaday | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qofkii Antoine Griezmann Ku Qanciyay Barcelona Oo La Ogaaday
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa ku sii dhawaanaya in uu noqdo xiddig Barcelona ah kadib markii ay kooxda Atletico Madrid xaqiijisay in uu xiddiga reer France ku biiri doono kooxda Barcelona xagaagan.
Wargayska Mirror ayaa haatan shaaca ka qaaday in xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi door weyn ka qaatay in uu Antoine Griezmann doorto in uu ku biiro kooxda Barcelona xagaagan.
Tan ilaa markii uu Antoine Griezmann xaqiijiyay in uu isaga tagayo kooxda Barcelona 3 todobaad ka hor xiddiga ayaa si weyn loola xiriirinayay kooxaha Barcelona, Man United, PSG iyo Bayern Munich kuwaas oo doonayay adeega xiddiga reer France.
Laakiin agaasimaha kooxda Atletico Madrid ee Miguel Angel Gil Marin oo la hadlaya wargayska Mundo Dportivo ayaa todobaadkii hore Yidhi” Waxa aan kala cadaynayaa meesha uu Griezmann ka ciyaari doono Waa Barcelona”.
Hadalka Agaasimaha Atletico Madrid ayaa yimid xilli uu xiddiga reer France sheegay in uu ogyahay meesha uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe inkasta oo uuna saxaafada la wadaagin kooxda.
Kooxda Man United ayaa isku dayday in ay daqiiqadihii ugu dambeeyay Barcelona ka afduubato saxiixa xiddiga laakiin wargayska Mirror ayaa sheegaya in uu Lionel Messi si shaqsi ah ula hadlay xiddiga kuna qanciyay in uu ku soo biiro kooxda xagaagan.